ZACC Yowongorora Mawanirwo Akaitwa Degree NaAmai Mugabe?
Ndira 10, 2018
Komishini yeZimabwe Anti Corruption Commission, inonzi iri kuferefeta ‘doctorate degree’ rakapiwa vaive mudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe, neUniversity of Zimbabwe makore matatu apfuura.
Izvi zvinotevera tsamba inonzi yakanyorerwa ZACC nevamwe vadzidzisi vepachikoro chepamusorosoro ichi vachinyunyuta nemawanirwo anonzi akaitwa degree iri naAmai Mugabe, ayo vanoti ane huwori mukati.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union Of Zimbabwe, Doctor Takavafira Zhou, vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti vamwe vanhu varambe kuti vatungamiri venyika vaite vakuru vema university, kana kuti chancellor.
“Senyika, tinofanira kuti ma universities senzvimbo inopakura ruzivo, asiyaniswe kubva kune zvematongerwo enyika. Vakuru venyika vanofanira kuti vazvirumure kubva pakuti ndivo ma chancellor ema universities.”